Xaflada Madaxtooyada: Hanaanka loo qabto xafladaha Madaxbanaanida Somaliland ee Madaxtooyada ka dhaca wali way hooseeyaan. Qalinkii Cabdiraxmaan Maxamed Sh. Yoonis.
Wednesday May 19, 2021 - 01:50:35 in Maqaallo by Super Admin
Waxaad moodaa inay noqdeen caways Heeso iyo Casho loo tago, halkii ay ahayd in fariimo waawayn oo dunida loo dirayaa kasoo baxaan.
Waxaynu u baahanahay in qaabka loo qabto xaflada Madaxtooyada laga badalo qaabkan aan waxba iska badalin ee soo jireenka noqday.
Mar hadii wufuud dalalka Caalamka ka timid iyo Warbaahintii Aduunku ay goob_joog ku tahay goobta indhahana aad loogu hayo xaflada habeenkaas ka dhacaysa Madaxtooyada.
Waxay ku qurux badnayd in xafladaasi ay noqdaan kuwo is bad-badala oo sanad walba horumar iyo farshaxan ka muuqdo inay noqdaan.
Xaflado Heesuhu kooban yihin, hadalkana loo badiyo marti sharafta , sida tusaale ahaan in Dalalka kasoo qayb galay munaasibada kalmado la siiyo, Axsaabta Mucaaridka ahi kalmado ku lahaadaan iyo in goobta lagu soo bandhigo waxyaabo muujinaya guulaha la gaadhay mudadaas ay Somaliland jirtay iyadoo loo soo bandhigayo qaab Farshaxan ah oo muuqaalo lagu soo bandhigayo taariikhda Somaliland.
Waxaynu u baahanahay in 30 sano kadib aynu ka gudubno xafladahan Madaxtooyada lagu qabanayo ee fanaaniin tiro badan oo garbaha isku haya gacmahana ruxaya aynu ku cawayno, Xaflada madaxtooyada ka dhacaysana aynu macno balaadhan u yeelno oo Dunida wax lagu tuso!